थ्रेड रोलि machine मेसिन स्थापना गर्दा सावधानहरू - Somose
थ्रेड रोलि machine मेशीन स्थापना गर्दा सावधानहरू
Of को चिसो रोलि process प्रक्रिया थ्रेड रोलिंग मेशीन हाल एक अझ उन्नत गैर काट्ने प्रक्रिया हो, जसले वर्कपीसको आन्तरिक र बाह्य गुणस्तर राम्रोसँग सुधार गर्न सक्दछ, र प्रशोधन समयले उत्पन्न रेडियल कम्प्रेसन तनावले वर्कपीसको थकानमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्छ। शक्ति र परिवर्तनको शक्ति, सामान्यतया, एक कुशल, ऊर्जा बचत, कम लागत, गैर काट्ने प्रक्रिया हो।
Of को मुख्य कार्य थ्रेड रोलिंग मेशीन चिसो अवस्था अन्तर्गत workpiece को धागा, सीधा रेखा र टिलिल रोलिंग रोक्न को लागी हो, र त्यसपछि सीधा दाँत, पेटीदार दाँत र तिरछा पट्टि गियर मा रोलिंग रोक्न, र त्यसपछि एक सीधा, घटाउने, रोलिंग, मा रोलिंग रोक्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न गठन भागहरु। यसको अपरेशन मुख्यतया सुरक्षित र भरपर्दो शक्तिमा निर्भर गर्दछ। यसको मुख्य प्रणालीमा तरल कार्यान्वयन प्रणाली र नियन्त्रण प्रणाली छ। त्यहाँ तीन कार्य चक्र रूपहरू छन्, म्यानुअल, अर्ध स्वचालित र स्वचालित।
√ त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका हुन्छन् थ्रेड रोलिंग मेशीन बजार, एक दुई-अक्ष धागा रोलिंग मेशिन हो, जुन सस्तो मूल्यको कारण अधिक सामान्य हो। अर्को तीन-अक्ष, तीन-अक्ष मेसिन हो जसले मुख्यतया पातलो-पर्खाल ट्यूबलर ईन्जिनियरिंग भागहरू प्रक्रिया गर्दछ, जस्तै एक ईन्जिनियरि building भवनको खाली स्क्रू।
The थ्रेड रोलिंग मेशीन उपकरण स्थापना भएको बेलामा ध्यान दिन आवश्यक छ
Used थ्रेड रोलि machine मेशीनको प्रयोग गर्नका लागि राम्रो प्रभाव पार्नको लागि, स्थापना गर्दा धेरै पक्षहरू सावधान हुनुपर्दछ। त्यसोभए तपाईंले केमा ध्यान दिन आवश्यक छ?
१. थ्रेड रोलिंग मेशीन स्थापना गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि यसको ग्राउन्डिंग भरपर्दो छ। थ्रेड रोलि machine मेशिन निर्माताले सिफारिश गर्दछ कि एक उपयुक्त फ्यूज उपकरण नेतृत्व-इन पावर आपूर्तिमा स्थापित होस्। प्रयोगको क्रममा अपरेटरलाई अझ सुरक्षित बनाउनको लागि, चुहावट संरक्षण उपकरण स्थापना गर्नु राम्रो हुन्छ। थप रूपमा, यो स्थापनामा गाड्नको लागि एक पावर कर्ड परिचय गर्न सिफारिस गरिन्छ।
२. बिजुली बक्स उपकरण खोल्नुहोस् र ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस् कि भित्रका सबै टर्मिनलहरू खाली छन। यदि तपाईंले समस्या पाउनुभयो भने, तिनीहरूलाई तुरुन्त कडा पार्नुहोस्। थ्रेड रोलिंग मेशिन निर्माताले तपाईंलाई सम्झना गराउँछ कि तारहरू पूरा भएको छ र यो टुक्रिएको छालाको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तपाईंले तारको स्थिति जाँच गर्नु पर्छ। जब समस्याहरू फेला पर्दछ, तिनीहरू समयमै प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ।
The. पावर अन गरिसके पछि चालु परिक्षणको क्रममा हाइड्रोलिक मोटरको सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ र यो घडीको दिशामा घुम्ने अवस्थामा छ भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, चिसो पानी पम्प पनि एक धेरै महत्त्वपूर्ण घटक हो। यदि शीतलक उल्टो छ भने शीतलक बाहिर आउँदैन, वा यो एकदम थोरै बाहिर आउँदछ। मुख्य मोटर बेवास्ता गर्न सकिन्छ। यो workpiece र प्यानलमा बायाँ वा दायाँ घुमाउन रोलिंग मोल्डको चयन स्विचको आधारमा निर्धारित गरिन्छ। यदि चरण अनुक्रम गलत छ भने, केवल पावर कर्ड खाली छोड्नुहोस्। दुई चरण लाइनहरूको स्थिति परिवर्तन गर्न ठीक छ।
हाम्रो कम्पनीले थ्रेड रोलिंग मेशिन र बार बेंडिंग मेशिन र ठूलो रोलिंग मेशिनको एक प्रकार प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं बढि उत्पादन जानकारी जान्न चाहानुहुन्छ भने कृपया हाम्रो उत्पाद इन्टरफेसमा लगईन गर्नुहोस् बुझ्नका लागि हामी तपाईंको सम्पर्कको प्रतीक्षामा छौं।
थ्रेड रोलिंग मेशिनको हाइड्रोलिक तेल कसरी बदल्ने र स्थापना गर्ने? The थ्रेड रोलि machine मेसिनको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि दबावलाई सुनिश्चित गर्नु हो […]